छोराछोरीलाई जिम्मेवारी- विचार - कान्तिपुर समाचार
वैशाख १९, २०७८ यमुना पराजुली अधिकारी
उसैले केही गरिहाले पनि ‘तिमी यो सक्तैनौ’, ‘तिमीबाट यो हुनै सक्तैन’ भन्छन् । यसरी ऊ काम गर्नुअघि नै हतोत्साही हुन्छ । उसले केही गर्न खोजे अभिभावक कराइदिन्छन् वा हाँसिदिन्छन् । घरकै सरसफाइ वा आफ्नै लुगा धुन खोज्दा पनि उसलाई अभिभावकले जहिल्यै ‘तिमी यो नगर, बरु टीभी हेरेर बस’ भन्छन् । खालि यस्तै कुरा मात्र सुनेपछि ऊ यति ‘नर्भस’ हुन्छ, खाना खाँदा पनि उसको ध्यान चम्चा ठीकसँग समातेको छु कि छैन भन्नेमै गइरहन्छ । खाँदा, बस्दा, हिँड्दा केही नमिलेर कसैले कराउने वा गिज्याउने त होइन भनी सोचिबस्छ । यसले उसलाई निकै मानसिक तनाव दिइरहेको हुन्छ र ऊ हरपल डराइरहन्छ । बिस्तारै कसैसँग नबोल्ने, बोलाउँदा पनि झर्कने र एक्लै सुत्ने बानी पर्दै जान्छ उसलाई ।
एक दिन, क्रिसमसको अवसर पारेर परिवारका सबै सदस्य बाहिर जाने योजना बनाउँछन् । भूलवश, ऊ भने घरमै छुट्छ । त्यसपछि सुरु हुन्छ, उसको कहानी । सुरुमा त, ओछ्यानबाट उठेपछि कसैलाई नदेख्दा ऊ आत्तिन्छ, तैपनि आफूलाई स्वतन्त्र पाएर निकै खुसी हुन्छ । पहिले कसै न कसैले हेरिरहेको छ भन्ने लागेर गर्न नसकेका कामहरू एक्लै हुँदा खुसी भएर फटाफट गर्छ । घर सरसफाइदेखि बजार गएर सामान किन्नेसम्म एक्लैले गर्छ । यति मात्र होइन, घरमा आएका चोरहरूलाई पनि चलाखीपूर्वक समाएर प्रहरीको जिम्मा लगाइदिन्छ ।
यता, आधा बाटो पुगेपछि अभिभावकले छोरा छुटेको थाहा पाउँछन् तर तुरुन्तै घर फर्कन पनि असमर्थ हुन्छन् । दुई दिनपछि घर फर्किंदा छोराले गरेको काम देखेर उनीहरू दंग पर्छन् । त्यस बेला आफूले पहिले गरेको व्यवहार सम्झेर उनीहरूलाई नराम्रो लाग्छ अनि छोरासँग माफी माग्छन् ।
यो सिनेमा हेरिरहँदा मलाई एक साथीको खुबै याद आयो । बल्लबल्ल साथीहरू भेट्दा पनि उनलाई जहिल्यै हतार मात्र हुन्थ्यो । हतारिनुको कारण थियो— छोरो विद्यालयबाट आउने बेला हुनु । उनको यस्तो चाला देखेर मैले पटकपटक भन्ने गर्थें, ‘खाजा बनाएर राखिदिनु नि कहिलेकाहीँ ! झिकेर खान्छ, बानी पनि त लगाउनुपर्छ । यसो गर्दा उसलाई आफू जिम्मेवार भएको महसुस हुन्छ । आफ्नो काम आफैं गर्नुपर्छ भनेर पनि सिक्छ ।’ मेरो कुरा सुनेर उनी भन्थिन्, ‘आम्मै, त्यसरी कहाँ हुन्छ ! विद्यालयबाट आउँदा मलाई देखेन भने रोइहाल्छ नि !’ यति भनेर उनी आफ्नो बाटो लाग्थिन् । जता, जे काममा भए पनि, तीन बजे घर पुग्नैपर्थ्यो उनलाई ।
अहिले उनको छोरा ठूलै भइसक्यो तर अझै उनको तरिका उही छ, तीन बजे घर पुग्नैपर्ने । उनको बुझाइ भने फेरिएछ । हालैको भेटमा उनले भनिन्, ‘हो यार, तिमीले ठीक भनेकी रैछ्यौ । सानै छ भनेर मायाले मैले आफैं खाजा खुवाएँ, अहिले यो बानी छुटाउन गाह्रो भइरहेको छ । विद्यालयबाट घर आउँदा मलाई देखेन भने त्यसै न्यास्रेर बस्छ । बनाएर राखेको खाजा पनि खाँदैन ।’ उनको छोरोलाई ‘आफ्नो काम आफैं गर्नुपर्छ’ भनेर सिकाउन ढिलो भइसकेको छ ।
मेरी एक भाउजू हुनुहुन्छ, उहाँको घर जाँदा सधैं सानी भदैनीले नै खाजा बनाउँछिन् । उनलाई मैले विद्यालयबाट आइसकेपछि आफ्ना लागि खाजा आफैं बनाएर खाएको देखेकी छु । दाजु–भाउजू शिक्षक हुनुहुन्छ । भाउजू आफ्नी छोरीको तारिफ गर्दै भन्नुहुन्छ, ‘हामी घरमा नहुँदा कहिलेकाहीँ त सबैका लागि खाजा तयार गरेकी हुन्छिन् ।’ भाउजूले पनि मेरी साथीको जस्तै हतार गरेर छोरीका लागि खाजा बनाउन दौडिने गर्नुभएको भए, यस्तो बानी आउँथ्यो होला त ? सानी भदैनी मेरी साथीको छोराले झैं बाटो हेरेरै बस्थिन् होला नि !
भाउजू भन्नुहुन्छ, ‘सानैदेखि उमेरअनुसार काम हामीले नै दिनुपर्छ ।’ खाजा बनाएर राखिदिएको झिकेर खान सक्ने उमेर भयो कि भएन, आफैंले चिया बनाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भनी अभिभावकले नै ख्याल गरेर उमेरअनुसार जिम्मेवारी दिनुपर्छ । तर, यस्तो जिम्मेवारी दिँदा अभिभावकले जबरजस्ती गर्न हुँदैन । फकाएर हुन्छ कि फुर्क्याएर, उनीहरूले खुसीखुसी काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । यसो गरे बिस्तारै उनीहरूलाई बानी पर्छ । आफूलाई पनि सजिलो, उनीहरूकै लागि पनि राम्रो । पछि देश–विदेश गए कसले पकाएर खान दिन्छ, उनीहरूलाई ? कलिलै उमेरमा बालबालिकालाई कामको जिम्मेवारी दिए ‘म सक्षम छु’, ‘यति गर्न सकिहाल्छु नि’ भन्ने भावना आउँछ, जसले उनीहरूमा आत्मविश्वास बढाउँछ ।
हामी पनि एकपटक सोचौं त, जेलाई माया भनेर छोराछोरीका लागि गरिरहेका छौं, कतै त्यसले उनीहरूमा कुनै असर त पारिरहेको छैन ? हरेक काममा बाबुआमाकै भर परेर बसिरहेका त हुँदैनन् ? आफ्ना छोराछारीको माया कसलाई हुँदैन र, तर एकै छिन यो भावनालाई दबाएरै भए पनि उनीहरूलाई उमेरअनुसार जिम्मेवारी दिएर सानैदेखि सक्षम बनाउनुपर्छ ।
प्रकाशित : वैशाख १९, २०७८ ०८:१८
जोखिममा खटिन्छन्, भत्ता पाउँदैनन्
‘पहिलाकै जस्तो खाईपाई आएको तलब काटेर संक्रमितको उपचार गर्नुपर्ने होला, जोखिम भत्ता त सरकारको निर्णयमा मात्रै हो’
वैशाख १९, २०७८ मकर श्रेष्ठ
काठमाडौँ — स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्र श्रेष्ठ कोरोना संक्रमण दर उच्च रहेको नेपालगन्ज, दाङ र बुटवलको अवस्था बुझेर बिहीबार काठमाडौं फर्किए । ती ठाउँमा संक्रमितको उपचार संक्रमित चिकित्सकले नै गरेको उनले देखे । ‘भेरी अस्पतालमा त ७० भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भइसकेका छन् ।
सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भइदिएको भए आफ्नै ज्यान जोखिममा राखेर काम गर्ने कर्मचारीले भत्ताका लागि आवाज उठाइरहनु पर्दैनथ्यो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले गएको कात्तिकसम्मकै जोखिम भत्ता पाउँदा अस्पतालमा संक्रमितकै उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीले सरकारले निर्णय गरेको भत्ता पनि पाउन सकेका छैनन् । ‘जहाँ गए पनि जोखिम भत्ताको कुरा के हो, कहिले पाइन्छ भनेर सोध्छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘यस विषयमा तत्काल केही न केही निर्णय हुनुपर्ने देखिन्छ ।’ संक्रमितको उपचारमा खटिनेको मनोबल उच्च बनाउन तत्काल ‘इन्सेन्टिभ’ प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने उनले बताए ।
एक जना मात्रै संक्रमित हुँदा २०७६ चैत ९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संक्रमितको उपचारमा संलग्न जनशक्तिलाई तलबको २५ देखि शतप्रतिशतसम्म जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी आदेश स्वीकृत गरेको थियो । सरकारले स्वीकृत गरेको आदेशअनुसार भत्ता उपलब्ध नगराउँदा स्वास्थ्यकर्मीहरू निराश छन् । ‘काम लगाउन खोज्यो पहिलाको त भत्ता पाएको छैन भन्छन् । थप २ सय बेड पनि सञ्चालन गर्न निर्देशन आएको छ,’ वीर अस्पतालका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने, ‘बिरामी उपचार गरेको आधारमा मात्रै पैसा पाइन्छ । त्यो पैसाले संक्रमितको खानादेखि सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्नुपर्छ जोखिम भत्ता कहाँबाट पुर्‍याउनु ?’
त्यसको अवधि सकिएकाले नयाँ व्यवस्था गरिदिनुपर्ने चिकित्सकहरूको माग छ । ‘अरूलाई नभए पनि फ्रन्टलाइनमा खटिनेको फेरि पनि कोरोना बिमा गर्ने व्यवस्था गर्न सकियो भने काम गराउन सहज हुन सक्थ्यो,’ टेकुस्थित सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीले भने, ‘संक्रमितको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको परिवारको स्वास्थ्य बिमा गरिदिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।’ बिरामीको उपचार गरेको संख्याका आधारमा मात्रै मन्त्रालयले दिएको भुक्तानीबाटै चिकित्सक र कर्मचारीलाई भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था आएपछि समस्या भएको उनको भनाइ छ । कोरोनाको अघिल्लो चरणमा यो अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई होटलमा राखेर आवश्यक परेका जुनसुकै बेला पनि काममा लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो । यसपालि बजेट नभएकै कारण घरबाटै आफ्नो ड्युटीका बेला काममा लगाउनुपरेको उनले बताए । सरकारले कोभिडका बेला काममा खटिने निजी होस् वा सरकारी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई खान र बस्नका लागि आवश्यक पर्ने रकमको व्यवस्था गरिदिए खुसी बनाएर काममा लगाउन सकिने उनको सुझाव छ ।
सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई क्वाटरमै राख्ने गरिएको छ । यो व्यवस्थाले आवश्यक पर्दा जुनसुकै बेला पनि प्रयोग गर्न सहज भएको एक चिकित्सकले बताए । ‘बिरामी उपचार नै आम्दानीको स्रोत भएको अस्पतालमा कोरोना संक्रमितलाई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । आम्दानीको स्रोत नहुँदा भत्ता त परै जाओस्, तलबसमेत खुवाउन हम्मेहम्मे परेको हुन्छ,’ डा. राजभण्डारीले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च राख्न इन्सेन्टिभ र उसले गरेको कामको सम्मान गरिदिनुपर्ने रहेछ ।’
दाङको कोभिड अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च राख्न स्थानीय तहले अस्पताललाई मासिक सहयोग उपलब्ध गराउने अभ्यास पाइएको प्रमुख विशेषज्ञ श्रेष्ठले बताए । ‘स्थानीय तहले दिएको रकमले अस्पताल प्रशासनले संक्रमितको उपचारमा खटिनेलाई भत्ता दिने योजना बनाएको रहेछ,’ उनले भने । स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउन स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार अग्रसर हुनुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । ‘स्वास्थ्यकर्मीहरू थकित भइसके, क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरू घर जान पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मीहरू कोरोना नियन्त्रणको युद्धमा होमिएका सेनाहरू हुन् । त्यसैले मनोबल उच्च बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।’
सरकारले यसअघि घोषणा गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्दाको असर बुटवलमा परेको छ । लुम्बिनी प्रदेशले स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकलाई विज्ञापन गरेर माग गर्दा पनि दरखास्त दिने कोही नभएको प्रमुख विशेषज्ञ श्रेष्ठले बताए ।